संयुक्त राष्ट्र संघीय प्राविधिक बैंकमा डा. पोषराज पाण्डे मनोनित - Artha ko Artha
संयुक्त राष्ट्र संघीय प्राविधिक बैंकमा डा. पोषराज पाण्डे मनोनित
काठमाडौं, १३ मंसिर । अतिकम विकसित मुलुकहरुको गरिबी न्युनिकरणको उद्देश्यले स्थापना गरिने संयुक्त राष्ट्र संघीय प्राविधिक बैकको उच्चस्तरिय समिती सदस्यमा नेपालका तर्फबाट डा. पोषराज पाण्डे मनोनित भएका छन् । यस बैंकको उच्चस्तरिय समितीले प्रविधि हस्तान्तरणबाट अतिकम विकसित मुलुकहरुको दिगो विकासका लागि सुझाव गर्ने डा. पाण्डेले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान की मुनले डा. पाण्डेको नाम मनोनयन गरेका हुन् ।
यस बैंकको अध्यक्षता रुवान्डाका शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा अनुसन्धान मन्त्री रुमेन मुरेन्जीले गर्ने छन् । मुरेन्जी हाल इटालीको एकेडेमी अफ साइन्सका कार्यकारी निर्र्देशक हुन् ।
बैंकको उच्चस्तरिय समितीमा १० जना सदस्यहरु रहने छन् । जसमा ५ महिला र ५ पुरुषहरु हुने डा. पोषराज पाण्डेले जानकारी दिए । उच्चस्तरिय समितीको पहिलो बैठक ट्रकीमा २०१५को फेब्रुवरीमा हुनेछ । उच्चस्तरिय समितीले अर्काे वर्षको अन्त्यसम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन महासचिव समक्ष बुझाउने जनाइएको छ ।
डा. पोषराज पाण्डे सावतिका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।